INGOSI: Ukufuna umendo unengane, akwehlukile nokufuna umsebenzi usuke waboshwa | isiZulu
INGOSI: Ukufuna umendo unengane, akwehlukile nokufuna umsebenzi usuke waboshwa
INGOSI: Abantu sebafihla amanyala abo ngegama lokusindiswa
INGOSI: Sekuyisikhathi sokuthi uGordhan ageze igama lakhe
INGOSI: Ake sibheke udaba lwengane ezalelwe ekhaya
Durban - Iphutha liyenzeka, ningalala nibabili nivuke senibathathu. Kuyothi umntwana engakaphumi ngisho ebeleni, ubaba ebe engasabonwa ngisho nangokhalo.
Pho uzokhalela bani? Ayikho into ongayenza mntaka ma! Khulisa umntwana wakho maqede usukume uzibuthe.
Iningi labesilisa lincamela owesifazane ongenaye umntwana, kunalo osevele ezele. Yize kunjalo bakhona abangenankinga, abathatha umntwana bamkhulise njengowabo.
Uma unomtwana oyedwa akubi yinkinga kakhulu kodwa uma sebebabili noma ngaphezulu kuba umqansa impela, ukuze uthole umshado uyodinga lonke uhlobo lwemikhuleko.
Uma ungumuntu wesifazane onomntwana noma abantwana, kubalulekile ukuqaphela uhlobo lowesilisa omsondeza enhlizweni yakho.
Khumbula ukuthi umntwana wakho nguye obaluleke ukwedlula indoda, musa ukudela umntwana wakho uhubhe umshado ongazi noma uyowuthola yini. Iningi lishiya izingane kogogo, uzwe kuthiwa umuntu usehlala nendoda eThekwini noma eGoli.
Umntwana udinga ukukhuliswa umama, lokho kumenza akhule ekhululekile enhlizweni nasengqondweni.
Funda nalolu daba: INGOSI: Akuwona umembeso, yizibizo!
Ayikho into eyedlula uthando lukamama, nakekela umntwana wakho, mgeze umgcobe ahlale ebukeka ehlanzekile ngasosonke isikhathi.
Mvikele kowesilisa omsondeza kuwe, qikelela ukuthi akahlukumezi umntwana wakho.
Gwema ukwazisa umntwana wakho kumuntu wesilisa osanda kuhlangana naye ngoba uma kwenzeka nihlukana bese uphinda uletha omunye akubukeki kahle futhi kuyamphazamisa umntwana.
Zinike isikhathi, thandana nesoka lakho ngasese uze ugculiseke ukuthi kukhona la eniphikelele khona, lokho akusho ukuthi fihla umntwana wakho esokeni lakho, lazise kodwa ugweme ukuliletha endlini uma kukhona umntwana wakho.
Umshado uyisibusiso esivela kuMdali, ungadeli umntwana wakho ngoba uhubha umshado. Shada nendoda ezothanda wena nomntwana noma nabantwana bakho, ngeke uhlale ngentokozo emshadweni nomuntu ohlukumeza umntwana wakho futhi lokho kuyomkhubaza umntwana wakho. Ngisho ngabe umntwana wakho wamthola ungahlelele, kubalulekile ukuthi uqinisekise ukuthi ukhula ngendlela efanele nephephile.
Disclaimer:INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi ezishicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.
UMBONO: Uyinkunzi emidwayidwa uZuma
Ezinye izindaba... Izindaba Zami...
Lowo owayengumengameli uJabob Zuma uthathe umbhobho wabonga labo abebezomeseka ngesikhathi evele eNkantolo eNkulu yaseThekwini.
IZITHOMBE: Inkonzo yePhasika yebandla laseGalile iThembalamazion
Sibuya kwimpelasonto yePhasika nazi izithombe zebandla iGalile iThemba Lezion.
UMBONO: Buphi ubufakazi bokuthi laba ababulewe yibona ababulala amaphoyisa
Kuhlukene imibono ngokubulawa kwabayisikhombisa endaweni yaseNgcobo ngoLwesihlanu ebusuku.
U-Ayanda Ncwane uzokhipha 'ingonyuluka' encwadini engempilo kaSfiso
Umshayeli wetekisi ubulawe ngesonto lokuqala ethole umsebenzi
Kutholakale indoda idutshuliwe emarobhothini eGoli
Cpt: 14-18°C Pta: 11-28°C
Jhb: 11-25°C Bloem: 4-23°C
Dbn: 20-26°C PE: 14-22°C
Bedfordview - 16:51:03 PM QUEUING TRAFFIC on the link to the N12 East at Gilloolys Interchange Ezinye zasemigwaqeni